Mpihaza haran-dranomasina | Reef Resilience
Ny biby mpiremby haran-dranomasina dia ampahany voajanahary amin'ny tontolo iainana mahasalama ny haran-dranomasina. Na izany aza, ny hakitroky ny corallivores sasany, toy ny crown-of-thorns starfish (COTS) (Acanthaster planci) ary sifotra mpihinana haran-dranomasina (indrindra Drupella spp. ary Coralliophila spp.) dia miteraka fihenan'ny haran-dranomasina lehibe sy miely patrana.
Misy teknika isan-karazany amin'ny fanesorana na fisorohana ny fiparitahan'ny corallivores, saingy amin'ny ankapobeny ireo teknika ireo dia tsy azo atao afa-tsy amin'ny fanaraha-maso ny haavon'ny faritra. Noho izany antony izany, ny fanaraha-maso ireo biby mpiremby haran-dranomasina dia matetika atao amin'ny mizana kely kokoa (hekitara vitsivitsy na latsaka), toy ny manodidina ny toerana fizahan-tany lafo vidy.
Satria ny otrikaina be loatra no mahatonga ny fihanaky ny COTS, ref Ny tetikady maharitra indrindra amin'ny fampihenana ny loza ateraky ny fihanaky ny COTS dia azo inoana fa ny fampihenana ny loharanon-tsakafo avy amin'ny tany amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny fitantanana ny rano.
Tsindrona COTS amin'ny snorkel. Sary © Shaun Wolfe/The Ocean Agency
Na izany aza, ny voka-dratsy ara-tontolo iainana sy ara-toekarena vokatry ny fihanaky ny COTS dia nanosika ny mpitantana sy ny sehatry ny fizahantany hamolavola teknika famonoana. Ny tsindrona COTS miaraka amin'ny vinaingitra mahazatra ao an-tokantrano dia heverina ho fomba mora indrindra sy mahomby indrindra amin'ny famonoana ny kintana. ref Ny fomba mekanika amin'ny fanaraha-maso ny COTS dia lafo ary mitaky asa, noho izany dia azo hamarinina raha tsy amin'ny haran-dranomasina kely manana lanja ara-tsosialy na biolojika ambony, toy ny toerana fanatodizana lehibe, faritra fizahan-tany, na faritra manana biodiversity avo dia avo. ref
Na dia kely aza ny haben'ny sifotra, dia mety hiteraka fahasimbana goavana amin'ny haran-dranomasina ny kisendrasendra manjopiaka rehefa miteraka haavo. Fanaraha-maso ny fihanaky ny sifotra, toa Drupella ary Coralliophila, dia voaporofo fa sarotra, na dia amin'ny mizana kely aza, noho ny tantaram-piainan'ny sifotra, ny fitondrantenany ary ny fifandraisan'ny tontolo iainana amin'ny haran-dranomasina.
Drupella mazàna aleony ny vato harana misampantsampana manana rafitra telo dimensions, izay mivondrona manodidina ny fototry ny sampana. Ny miafina lalina ao anatin'ny zanatany dia mahatonga azy ireo ho sarotra fantarina sy idirana. Nahitam-pahombiazana ny mpandraharaha ara-pizahantany sasany ao amin'ny Great Barrier Reef tamin'ny fampiasana tsipìka lava sy fitaovana fanangonam-pako malefaka mba hanesorana tsirairay ny sifotra. Mety handany fotoana be izany, ary sarotra ny mahazo antoka fa ny biby rehetra dia esorina amin'ny zanatany iray. Ny traikefa hatramin'izao avy any Aostralia dia manoro hevitra fa ny fanesorana sifotra dia mety hahomby amin'ny fampihenana ny fahaverezan'ny tavy na ny fahafatesan'ny zanatany haran-dranomasina. ref saingy tsy azo inoana fa hahomby amin'ny maha-mety hifehezana ny isan'ny mpiremby. Any Florida, fanesorana tanana ny Coralliophila ny sifotra dia anisan'ny Drafitra fanarenana ho an'ny elkhorn (Acropora palmata) sy haran-dranomasina staghorn (Acropora cervicornis), na izany aza dia mbola eo an-dalam-pandrosoana ny torolàlana mety amin'ny fanesorana. ref
Drupella sifotra amin'ny zanatany A. millepora any Thailand. Sary © Chad Scott/Conservation Diver
Faritra arovana an-dranomasina sy mpiremby haran-dranomasina
Ny faritra arovana an-dranomasina dia hita fa manamaivana ny habetsahan'ny biby mpiremby amin'ny haran-dranomasina amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny fiarovana ny biby mpiremby izay mihinana sy mifehy ny corallivores. Izany dia naseho ho an'ny COTS, ref Drupella sifotra, ref ary Coralliophila sifotra, ref ary manasongadina ny andraikitry ny paikady fitantanana mihetsiketsika (fanalana) sy mavitrika (fiarovana ny faritra an-dranomasina) amin'ny fanaraha-maso ny fandrahonan'ny corallivores be loatra ho an'ny haran-dranomasina.